Umdlalo obandayo wemfazwe ebandayo 🥇 Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
UmdlaloPron Ifowuni yeDuty Ops emnyama: Imfazwe ebandayo
Joyina elona nqanaba liphezulu labaduni ngokujikeleza kwaye ube lilungu leMidlaloPron namhlanje!
Jonga ukuba yintoni i-COD Black Ops yethu: Imfazwe ebandayo GamePron kugula malunga nayo! Thenga imveliso yeentsuku ezi-1 namhlanje.
Ukukopela indlela yakho kwiinqanaba nathi apha kwi-GamePron! Thenga isitshixo semveliso yeveki e-1 namhlanje.
Ukuqhekeka kwi-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo ixesha elide ngeGamePron! Thenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje.
Iintshaba zakho azizukufumana nethuba lokuphendula kwimizi-mveliso yethu yemigangatho yemfazwe ebandayo, kwaye sisiqinisekiso.
I-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo GamePron Ulwazi loLwazi
I-COD Black Ops: I-Cold War GamePron ilingana negolide ngaphakathi kwishishini lokuqhekeza, njengoko ungazukufumana sixhobo semidlalo emitsha yolu mgangatho rhoqo. I-GamePron idibanise esi sixhobo ngoncedo lwabaphuhlisi abanamava, kwaye nangona ingasebenzi kwiWarzone, isaza kunika abasebenzisi be-Intel kunye ne-AMD ukonyusa okubalulekileyo kwiMfazwe ebandayo. Iza ngesiNgesi kwaye ixhasa ii-GPU zeNvidia / AMD, kwaye ngelixa isebenza eWarzone, ayenzelwanga ukuba isetyenziswe ngelixa uyidlala. Iintshaba zakho azinakulinganiswa kwi-COD yethu ye-Black Ops: Umdlalo obandayo weMidlalo
Utshaba kunye neQela le-ESP liya kukuvumela ukuba ubabone ngeendonga, nge-ESP ekumgama ekulumkisa ngokusondela (okanye kude) ekujolise kuko. Imfazwe ebandayo iAimbot inokwenziwa ngokusetyenziswa kwesangqa sethu se-FOV, uLungelelwaniso oluLungelelanisiweyo lweThambo, kunye neendlela eziPhambili zoPhuculo. Iinjongo zoMgama ziya kwenza abasebenzisi bazi umgama wezinto ezinokubulala.
Utshaba / ubuhlobo esp
I-Aimbot ene-FOV kunye neSmooth ngokwezifiso
Isitshixo senjongo esenziwe ngokwezifiso
Injongo yethambo ehlengahlengiswayo
Umsebenzi + we-esp kwimodi ye-zombie.
Malunga ne-COD Black Ops: Umdlalo obandayo weMidlalo
I-GamePron ibisoloko iluphawu olunxulunyaniswa nee-hacks ezikumgangatho ophezulu, ngaphandle kohlobo olo. Sisondela kuzo zonke izixhobo zethu sinengqondo efanayo nabanye ababoneleli ngeseva abanethemba lokuzifezekisa, yona egxile kumgangatho. Abasebenzisi bethu banokuzibonela ngokwabo indlela i-GamePron ezinikele ngayo kwinkqubo yophuhliso yazo zonke izixhobo esizikhuphileyo, njengoko ubungqina buphambi kwakho. Ngokufumana ukufikelela kobu buqhetseba, uya kuba nakho ukulawula imidlalo ngokwakho! Inqanaba lesakhono eliboniswe ngoogxa bakho kunye nabachasi alinamsebenzi xa i-COD Black Ops: Cold War GamePron yenziwe yasebenza.
Kutheni usebenzisa i-COD Black Ops: iMfazwe ebandayo GamePron ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Abanye ababoneleli ngokwenyani abanakukhathalela abasebenzisi babo, yiyo loo nto bengenangxaki ngokukhupha izixhobo ezingafikeleli kumgangatho ophantsi. I-GamePron ayizukubonelela abasebenzisi ngokukhohlisa okuphezulu kweMfazwe ebandayo, siza kuyenza ngokuguquguquka. Kuya kufuneka ukhethe ukuba ufuna ukusebenzisa ixesha elingakanani izixhobo zethu, kodwa sele siyazi ukuba uza kubambeka emva kokuzama kokuqala. Ukuchonga umdlali wakho ngaphandle kwamanqanaba ahlekisayo okuchaneka kunokwenzeka nge-COD Black Ops: Imfazwe ebandayo GamePron Ukukopela, kodwa sukuthatha nje ilizwi lethu. Yiba lilungu leMidlaloPron namhlanje kwaye ungafumana amava onke ekufuneka siwenzele wona kwiMfazwe ebandayo.
Enye yezona zinto zingahoywanga nakuphi na ukuthengisa kwimarike kufuneka ibe kwimenyu yomdlalo, oludibaniso oluthe ngqo phakathi kwabasebenzisi kunye nezixhobo ngokwazo. Ukuba awunayo imenyu ethembekileyo yomdlalo-ekuvumela ukuba uqwalasele useto lwakho lomnqweno yimfumba, uya kuba yimfama! I-GamePron inemenyu engaphakathi komdlalo ekuvumela ukuba wenze ngokwezifiso amava omnatha ukusuka phezulu kuye ezantsi, okunokubaluleka kwimpumelelo yakho kumdlalo ofana neCOD Black Ops: Imfazwe ebandayo. Ufuna kwakhona ukuqinisekisa ukuba i-hack isebenza ngendlela efihlakeleyo, enokuthi yenziwe kuphela ngokuseto kwesiko. Ufumana ukwenza inkqubo yokukhangela eyenzelwe wena kunye neMidlaloPron!
A6. Ewe, le mveliso inokusetyenziswa kuyo nayiphi na indlela yescreen sefestile, ngokuchasene nemodeli yangaphambili yeWarzone.
Umbuzo 7. Ndingabasebenzisa abalawuli?
A7. Ewe, kodwa jonga ufuna ukubuyela ngesixhobo sokuhlaziya.
Thenga isitshixo semveliso esakho namhlanje kunye namava okubonelelwa yiGamePron! Esona sithembiso sinokubakho kwimfazwe ebandayo kwi-Intanethi cofa nje kude.
Ilindelwe Lawula kunye yethu COD BO GamePron lomnqweno yimfumba?